HOYA BELLA BEAUTIFUL: DARYEELKA GURIGA IYO SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Horumarka Hoya: Horumarinta iyo Daryeelka
Hoya waa warshad reer Family Lastovnev, waxayna leedahay qiyaastii 200 nooc. Noocyada ugu caansan waxay kala yihiin: hoya-meer, hoy dheer iyo hoy-ga.
Hoya waa qurux - mid ka mid ah dhirta ugu quruxda badan oo aan caadi ahayn. Waddanku waa Jasiiradda Pacific, Thailand, Australia iyo Hindiya.
Buuban yar, oo leh caleemo dhuuban iyo caleemo yaryar, ayaa la koray sida warshad ampelous ah.
Magaca saxda ah ee warshadani waa Hoya lanceolata bale. In dabiiciga ah, xaaladaha kulaylaha ee koritaanka, waa epiphyde. Wixii sii koraya guriga, waxaa fiican inaad isticmaasho dhar xidhmo ama dhar caag ah.
Nidaamka Rootka Hoya waa mid yar oo aad u tabar daran. Si looga hortago dhirta laga bilaabo dhimashada, waa in lagu beeray oo keliya godadka, weelasha ballaaran ee 2-3 jeermiska.
Goobaha Hoya waxay leedahay khafiif, jilicsan oo dabacsan, grayish-cagaaran, oo leh khafiif ah qaro weyn iyo caleemo adag. Caleemaha waa muddo dheer, hoos u dhacaya, uma baahna taageero. Isku-duubka afkoda ayaa si dhakhso ah u koraya, sameynta dalladaha waaweyn ee ubaxa ah ee darafka caleemaha.
Leaves rhomboid, calaamadsan, cidhiidhi ah, yar yar (2-4 cm dheer). Dhinaca sare ee caleemaha waa cagaar madow, oo hoos waa iftiin, cad.
Ubaxa Hoya quruxda waa qurux badan. Qaab ciyaareed ahaan, waxay u eg yihiin xiddigo yar oo cad oo leh dhar guduudan ama casaan. Waxay ku koraan isku-dhafka, dalladaha, 7-9.
Kani waa warshad aan caadi aheyn oo aan u baahnayn xaalado gaar ah. Daryeelka waa mid aad u fudud, laakiin waa inaad raacdaa xeerar.
Waxaad ka iibsan kartaa jirida choyi ah, ka samee, oo ku kayee weel diyaar u ah ciid. Marka la beero, dheecaan ayaa la dhigayaa hoose ee taangiga, lakabka yar ee substrate ah ayaa lagu shubay, 2-3 gooyn ayaa la dhigayaa iyo kula saydhaa qadar yar oo ciid ah. Ka dib markii laga beerto, sprouts biyo maaha ilaa 1-2 maalmood.
Aad bay muhiim u tahay inaad si sax ah u sameyso substrate. Waxaad qaadan kartaa ciidda orchid dhameysatay oo ku dar ciid yar.
Beereyaal badan ayaa doorbida inay ciidda diyaariyaan dhul wareega, peat, ciid iyo compost, oo ah saamiga 2: 1: 1: 1. Marka lagu daro maaddooyinkaas waxa lagu daraa jilif yar oo jar jartey, xoqan iyo dhuxul.
Hoya Bella ma jecla dhirada waaweyn. Waa in lagu dhex daro weel yar, weelal gacmeed si markaa xididada loo yareeyo. Waxaad isticmaali kartaa dheriyo caag yar yar, oo leh tiro badan oo godad dheecaan leh. Qeybta hoose ee taangiga waa in la dhigaa lakabka yar ee dheecaan. Ka taxadar markaad beerto, sababtoo ah dhirta waa sun.
Biyaha warshadda sida ciidda u engegan. Aad bay muhiim u tahay inaysan u oggolaan in la joojiyo dareeraha dareeraha.. Wakhtiga ubaxyada ubaxa ah biyo ugu yaraan saddex jeer toddobaadkii, iyo ka dib - kaliya laba jeer bishii. Biyaha kahor-difaac ama isticmaal roob. Heerkulka biyaha waa inuu ahaado 2-3 digrii oo ka sarreysa heerkulka qolka. Xilliga jiilaalka, waraabinta si adag ayaa loo yareeyey.
Hoya waxay jeceshahay hawada qoyan. Xilliga kuleylka, waa in la buufiyaa, ka hortagga biyo gelinta burooyinkeeda. Ka dib markii la raaco nidaamkan, caleemaha si taxadar leh u tirtir.
Hoya wuxuu jecel yahay qorax badan. Laakiin at duhurkii, daaqada koonfureed, geedka waxoogaa yar ayaa pritenyut ah. Xilliga qaboobaha, hoyga ayaa u baahan qorraxda ugu sareysa.
Hoya Bella ma jecla kuleylka.
Waxtarka ugu fiican wuxuu noqon doonaa: 22-25 C xagaaga iyo 17-18 C xilliga jiilaalka.
Warshadu uma dulqaadanayso qorshaha iyo isbedelka heerkulka isbeddelka.
Hoyaaga quudinta xagaaga laakiin wax ka badan 2-3 jeer bishii. Si arrintan loo sameeyo, isticmaal xal aad u tabar daran Bacriminta macdanta adag.
Laga soo bilaabo qiyaas ballaaran oo warshad bacriminta ah ayaa dhiman kara.
Sidaa darteed, dhar xidhashada waa inay ahaato mid taxaddar leh.
Qalab ka dib iibsashada
Hoya Bella waa in la badalaa marka la iibsado. Mustaqbalka, kudheer kaliya sida loogu baahan yahay, laakiin aan ka badneyn hal mar seddexdii sanaba mar.
Nadaafad qurux badan Gooynta Hoya iyo dhejinta. Stems jamaca faafin si loo helo ubax sanadka ugu horeeya ka dib markii laga beerto. Si arrintan loo sameeyo, ku dhaji dherer dheer wuxuu sameeyaa jeex qafiif ah, waxay ku duubaan gabal dhoobo ah-macmiil ah, ku xir xargaha oo ku dabool foorno fuushan. Ka dib markii xididdada u muuqdaan, caleemaha waa la gooyaa oo lagu beeray dhar gooni ah. Hal saxan ayaa la dhigay ugu yaraan 3 ka mid ah caleemaha xididadan.
Doorashada ugu fudud ee taranta - gooynta. Waxaa la doortaa in xididida jirida ay ahaato sannadkii hore, waxayna leedahay ugu yaraan laba lammaane oo caleemo ah. Si uu si dhakhso ah u qaato xididada, waxaa la gooyaa dhexe ee internodes. Waxaad kareyn kartaa jarida galaas biyo ah ama lagu daro substrate gaar ah. Kadib 45-50 maalmood oo ah xididdada caleemaha u muuqda oo waxaa lagu beeray meel joogto ah.
Hoya wuxuu ku jiraa xagaaga 1-2 bilood ka dib muuqaalka kore ee peduncles. Inta lagu jiro muddadaa, dhirta lama beddeli karo. Ubaxku wuxuu bilawdaa Maajo iyo Juun, waxana uu socdaa ilaa 8 maalmood. Ka dib markii in, ubaxyada, oo leh caws ubax, dhicin, laakiin dhawaan ku cusub yihiin muuqdaan. Inta lagu jiro xilliga ubax, hoya dabcan waxay u bixisaa ari aad u qaali ah vaniljiga, taas oo keeni karta madax xanuun.
Lifespan Hoya way weyn tahay. Waxay si tartiib tartiib ah kor ugu kacaysaa, oo leh daryeel habboon, waxay ku jiri kartaa waqti aad u dheer.
Marka qandho-xoqdo, hoya waxaa laga yaabaa in ay saameeyaan xagta uumeysiga budada ah iyo kallana. Mararka qaarkood waxaa soo weeraray mealybuga, dabacasaha iyo caarada caarada.
Si aad uga takhalusto geedka laga bilaabo caarada caarada Waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo xalka Actellic (15 dhibcood halkii litir oo biyo ah) iyo kordhinta qoyaanka qolka.
Marka gaashaanku muuqdo waxay u baahan yihiin in la tirtiro hoi caleemo biyo ah. Haddii ay jiraan cayayaanka badan, markaa daaweynta karbofos way ku caawineysaa.
Laga soo bilaabo mealybug Waxaad ka takhalusi kartaa toonta ama faleembo basal.
Si loo badbaadiyo xootada ka xajin xayrta, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo caleemaha iyo afkoda ay saameeyeen ubaxyada cad, bedelka lakabka sare ee carrada iyo daweynta warshad leh diyaarinta fungicide.
Iyadoo guul darraynta caleemo xidid inta badan geedka lama kaydin karo. Xididdada hoya way daciifiyaan waxayna u dhintaan si dhaqso ah.
Iyadoo daryeelka saxda ah, koraan a jiinka quruxda badan ma aha mid adag. Xitaa florist aan khibrad lahayn ayaa sameyn kara.
Haddii aad raacdo hababka tamarta iyo iftiinka, waraabinta dhexdhexaadka ah iyo bacarimis, waxaad xaqiijin kartaa geedka nolosha dheer iyo ubax dheer.
Markaa waxaad arki kartaa sawirka guriga daryeelka ee Hoya Bell, qurux badan:
Ubaxyo xiiso leh oo la siinayo: beeritaanka hibiscus ee dhulka furan iyo sirta daryeelka dhirta
Noocyada dhirta qoryaha ayaa si aad ah isugu kala duwan - xitaa saynisyahannadu si sax ah uma xisaabi karaan lambarkooda, waxay tiriyaan lambarrada 12 ilaa 25 waxayna horseedi karaan dood tartiib tartiib ah: kaas oo qoyska ama caanaha lagu darayo tan ama noocyadaas. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan noocyada dhirta qoryaha laga bilaabo taariikhda hore ayaa waxaa isticmaala nin. Warshadani waxay ku raaxeeysataa jacaylka ninka, maxaa yeelay waxay leedahay: qoryaha jilicsan iyo iftiin leh waxyaabo sarreeya (badeecada qoryaha ayaa si fiican loo ilaalin karaa qarniyo); Guryaha fungicidal (fangaska iyo sheyga kale ee ka hortagga dhirta); caraf udgoon (foox laga sameeyey tar); tayada daaweynta; quruxda iyo qurxinta. Read More